आखिर सगरमाथामा पहिलो पाईला कसले राख्यो ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०२:१४ |
नेपालमा पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्रहरुबाट भएका कार्यहरु राष्ट्रहित बिपरित हुदै आएका छन् । हालसालै छिमेकी देश भारतले सिमा मिच्नु, नया सडक खोल्नु र नाकामा भएका पिल्लरहरु भत्काउनु र यता चिनले सगरमाथा चिनमा पर्छ भन्नुले नेपाल माथि छिमकि देशको कुदृष्टी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चर्चा गरौ अब सगरमाथामा पहिलो पाईला आखिर कस्ले राख्यो ?
सगरमाथामा पहिलो पाईला कस्ले राख्यो भनेर प्रश्न राख्ने हो भने सहजै उत्तर आउछ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा ? यस बिषयमा पनि धेरै बिबादहरु आउन थालेका छन् । यस बिषयमा हामिले फ्याक्ट चेक गरेको छौं ।
सन् १९५२ को ग्रीष्म ऋतुमा स्वीस नागरिकहरूलाई सगरमाथा आरोहण गर्ने स्वीकृति दिएपछि सन् १९५३ सम्ममा बेलायती नागरिकहरूलाई सफल आरोहणको लागि अन्तिम मौका दिइएको थियो । सन् १९५४ मा फ्रेन्च नागरिकहरूलाई र सन् १९५५ मा स्वीस नागरिकहरूलाई आरोहण अनुमति दिइएको थियो । बेलायती हिमालयन समितिले उच्च पहाड एवम् हिमाल चढाइमा कीर्तिमान प्राप्त गरेका एक सेना अधिकृत जोहन हन्टलाई समूह नेताको (टिम लिडर) रूपमा नियुक्त गरेको थियो । उनले नेतृत्व गरेको समूहले सन् १९३६ मा सगरमाथाको साहसिक यात्रामा सफलता हासिल गर्न सकेन । हन्टको समूह ठूलो थियो । सिपटनका साथमा सन् १९५२ मा चढेका मानिसहरू पनि त्यहा समावेश भएका थिए । उक्त समूहमा जर्ज व्याण्ड, टम वोर्र्डिन, चार्लस्, अल्फ ग्रेगरी, एडमण्ड हिलारी, जर्ज लोवे, माइकल वार्ड, टिम डाक्टर, मिखाइल वेष्टमाकोट र चार्लस वाइली समावेश भएका थिए । त्यसैबेला जेम्स मोरिसले पत्रिकाको लागि समाचार लेख्ने र टम स्टोवर्टले त्यस कार्यको फोटो खिच्ने कार्य गरेका थिए । तेन्जिङ्लाई शेर्पाहरूको सरदार भै आरोहण समूहमा समावेश हुन निमन्त्रणा गरिएको थियो । त्यस साहसिक यात्राका क्रममा आधार शिविरदेखि ल्होत्सेको मोहडासम्म पंक्तिबद्ध रूपमा शिविर स्थापना गरिएका थिए । उक्त यात्रामा दुई प्रकारका अक्सिजन उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइएका थिए । मे २६ मा विहान ७ बजे वोर्डेलो र इभान्स दुवैजना हन्ट एवम् नामग्याल शेर्पाको साथमा खोंचबाट शिविरतर्फ प्रस्थान गरे । वोर्डेलो र इभान्सले सुरूमा राम्रो प्रगति गरे पनि हिउँ र अक्सिजन सेटको कारणले आरोहणमा ढिलाई भयो । अन्त्यमा उनीहरूको प्रयास सफल भएन र तल झरे । २८ मे को दिन हिलारी र तेन्जिङ् लोवे एवम् आङनिमाको सहयोगमा नवौं शिविरमा पुगे । मे १९ को विहान ६.३० मा हिलारी र तेन्जिङ् माथि चढन सुरू गरे । दक्षिणी चुचुरोमा पुग्नुभन्दा अगाडि हिमपातका कारणले यात्रामा अवरोध आयो । यो अवस्थामा हिलारी त्रसित भए । एकातिर माथिबाट हिउाको पहिरो आइ ज्यान लिने स्थिति थियो, अर्कोतिर सगरमाथा शिखरमा पुग्ने एकमात्र मौका गुमाउन नहुने अवस्था थियो । उनीहरू विहान ९ बजे भिराले चढेर दक्षिणी टाकुरामा पुगिसकेका थिए । अन्तिम पर्वतधार चढन कठिन देखिन्थ्यो तर पनि उनीहरू धैर्यका साथ अगाडि बढे । यो नै अहिलेका प्रसिद्ध हिलारीको जटिल खुडकिलो थियो । अन्ततः तेन्जिङ् र हिलारी सजिलैसाग शिखरमा पुगे ।
यस्तो थियो पर्वतारोहणको ऐतिहासिक तालिका
Previousविदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन विमानस्थल सञ्चालनको तयारी
Nextबाँकेमा मध्यरातमा गाडी दुर्घटना, १२ जनाको मृत्यु, २१ जना घाइते
हेटौडामा सिलिण्डर बम विस्फोट
२८ बैशाख २०७४, बिहीबार ०६:१७
अष्ट्रेलियामा छिटो काम पाउनको लागि के गर्ने ?
९ आश्विन २०७४, सोमबार ०२:३८
२७ कार्तिक २०७६, बुधबार ०३:२३